Japan cultured pel / ako nkume / Pinctada fucata
Tags Nkume pel
A na-eji akpa pel nke jupụtara na Japan, nke a maara dị ka pearl pelya, nke ụdị oyiri pel, Pinctada fucata martensii, nke dị oke karịa 6 ka 8 cm dị elu, ya mere oke pel ndị dị elu karịa 10 mm n'obosara dị nnọọ obere ma na- ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Taa, a na-eji ngwongwo mollusk eme ihe na ma Japan na China na mmepụta pel.
Taa, a na-ekewa nkume pel ndị a zụlitere n'ahịa. Akụkụ nke mbụ na-ekpuchi pel pel, ndị gụnyere Akoya, South Sea na Tahiti. Aja ndị a na-eto eto na-eto eto, na-emekarị otu pel na-eto n'otu oge. Nke a na - egbochi ọnụ ọgụgụ pel mgbe oge owuwe ihe ubi. A na-egbukarị pel mgbe afọ zuru ezu maka akoya, 2 ruo 4 afọ maka Tahitian na South Sea, na afọ 2-7 maka mmiri ọhụrụ. Nke a bụ onye British biologist William Saville-Kent dere nke mbụ ya na Tatsuhei Mise na Tokichi Nishikawa si Japan. Akụkụ nke abụọ na-agụnye pel ndị ahụ a na-ejighị azụ, nke dị ka mmiri Biwa ma ọ bụ pel pel. Ka ha na-etolite n'uwe ahụ, ebe ọ bụla nku nke ọ bụla nwere ike ịbanye na 25 grafts, pearl ndị a na-emekarị ma jupụta ahịa ahụ n'ụzọ zuru ezu. Mgbanwe dị mma nke mma nwere n'ime afọ iri gara aga mgbe a na-eji akpa nkume ndị na-acha osikapa eme ihe atụ na pearl ndị dị nso taa. N'ime afọ abụọ gara aga, nnukwu ihe dịka oke pel dị iche iche na-ejupụta na 15mm dị na dayameta ka e mepụtaworo ya.
Ngwurugwu a na-eme ka a na-ahụ pel na-eme ka a na-atụgharị ya bụ nke a na-egbuke egbuke nke ọkpụkpụ mussel ọhụrụ. Tinyere obere mpempe akwa nke ọzọ si na mpius, onye na-enye onyinye, ka ọ bụrụ ihe na-akpali maka akpa pearl, a na-etinye ya na mpempe akwụkwọ n'ime ọkpụkpụ, akụkụ nke okike, nke nnu mmiri nnu. Na mmiri ogbugba mmiri, ọ bụ nanị akụkụ anụ ahụ ka a na-ejikarị mee ihe n'ọtụtụ okwu, ma tinye ya n'ime uwe anụ ahụ nke mussel host. Oké Osimiri South na Tahitian pearl oysters, nke a makwaara dị ka Pinctada maxima na Pinctada margaritifera, nke na-adịgide n'ịwa ahụ ọzọ iji wepụ pearl a kpochara, a na-ejikarị ọkwá ọhụrụ buru ibu dị ka akụkụ nke otu usoro ahụ wee laghachi na mmiri maka onye ọzọ 2 ruo afọ 3.